Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး - HBOT ကုထုံး - Hyperbaric ကုထုံး
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး - HBOT Therapy- Hyperbaric ကုထုံး
Home/Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး - HBOT Therapy- Hyperbaric ကုထုံး
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး - HBOT Therapy- Hyperbaric ကုထုံးteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT)
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးလည်းအဖြစ်လူသိများ HBOT, ကယ်တင်တတ်၏တစ်ဦးဆေးကုသမှုဖြစ်ပါသည် 100% အောက်စီဂျင် သူတို့တစ်တွေဖိအားအခန်းထဲကအတွင်းများမှာနေစဉ်လူနာရဲ့အဆုတ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလူနာပုံမှန်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လေထုမှာတွေ့ရှိခဲ့သော 21% ထက်ဝေး သာ. ကြီးအဆင့်ဆင့်အောက်စီဂျင်အသက်ရှူဖြစ်ပါတယ်။
"Boyle ရဲ့ဥပဒေ"စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်မှာ, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖိအားပြောင်းပြန်အချိုးကျဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ဆယ်လူလာ level မှာအောက်စီဂျင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအားဒီတိုးမြောက်မြားစွာလက္ခဏာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူအတွင်းအနာကျက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကူညီပေးနေအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်ကြပြီးခဲသည်အလွန်ကြာရှည်။ Hyperbaric ဆေးပညာအများဆုံးလက္ခဏာများများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်နာတာရှည်အနာကနေရှုပ်ထွေးမသန်စွမ်းနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းအထိပြဿနာများနှင့်အတူလူနာကူညီ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1600 ရဲ့ပြန်လည်ခြေရာကောက်နိုင်ပါတယ်သောဤဆေးကုသမှု။
1662, ပထမဦးဆုံးခုနှစ်တွင် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Henshaw အမည်ရှိဗြိတိသျှခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် operated ခဲ့သည်။ သူကအခွအေနအမျိုးမျိုးပြုမူဆက်ဆံရန်အသုံးပြုခဲ့အမည်ရဖွဲ့စည်းပုံသည် Domicilium, ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
1878 တွင်ပေါလု Bert, ပြင်သစ် physiologist, decompress အနာများနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အကြား link ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Bert နောက်ပိုင်းတွင်နာကျင်မှု recompression နှင့်အတူ ameliorated နိုင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင်လူနာကုသ၏အယူအဆအကြာတွင် 1879 အတွက်ဖိအားမိုဘိုင်း operating အခန်းတစ်ခန်းဆောက်သောပြင်သစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Fontaine ကဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်။ Fontaine ရှူရှိုက်မိပါသောနိုက်ထရပ်အောက်ဆိုဒ်တိုးတက်လာသောအောက်ဆီဂျင်ရှိခြင်းကသူ့လူနာတွေကိုအပြင်, ဖိအားအောက်မှာကြီးမြတ်သောအာနိသင်ရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်း 1900 ရဲ့ဒေါက်တာ Orville Cunningham, မေ့ဆေးတစ်ဦးပါမောက္ခ, သူတို့သည်မြင့်မှာနထေိုငျသောသူတို့ထက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှပိုမိုနီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့သည့်အခါအထူးသဖြင့်နှလုံးရောဂါများနှင့်အတူလူပိုကောင်းတိုးတက်ကြောင်းလေ့လာသည်။
သူကတုပ်ကွေးခံစားနေရပြီးသူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကုသမှုကြောင့်အဆုတ်ကန့်သတ်သေခြင်းအနီးဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအအသံအောင်မြင်မှုရေကန်အီရီ၏ကမ်းနားတလျှောက်တည်ရှိသော "သံမဏိ Ball ကိုဆေးရုံ" အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်ဘယ်အရာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ခြောက်ဇာတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ 1928 အတွက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အချင်းအတွက် 64 ခွကေိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးရုံ (3 PSI) အကြွင်းမဲ့အာဏာ 44.1 လေထုကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကြောင့်စီးပွားရေး၏စိတ်ဓာတ်ဘဏ္ဍာရေး status ကို၎င်းထိုသို့အပိုင်းအစများအတွက် 1942 အတွက်စဉ်အတွင်း deconstructed ခဲ့သည်။
Hyperbaric ကုန်သည်များအကြာတွင် decompress အနာရောဂါခံစားခဲ့ရသူကိုရေနက်ရေငုပ်သမားကုသရန်ဖို့ 1940 ရဲ့အတွင်းစစ်ရေးအရကတီထွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1950 ရဲ့ခုနှစ်တွင်ဆေးသမားပထမဦးဆုံး 1960 ရဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဆိပ်သင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင်သောနှလုံးနှင့်အဆုတ်ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်း Hyperbaric ဆေးပညာအလုပ်။ ထိုအချိန်မှစ. 10,000 ကျော်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်အသံအောင်မြင်မှုအစီရင်ခံရလဒ်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစုနှင့်အတူမြောက်မြားစွာအခြားကျန်းမာရေး-related application များအတွက်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။
အဆိုပါ UHMS ပုံစံလုပ်ရန် Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT) ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဖိအား (100 လေထုအကြွင်းမဲ့အာဏာ, ဒါမှမဟုတ် ATA) ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖို့ဖိအားသော hyperbaric အခန်းထဲကအတွင်းပိုင်းစဉ်တစ်ဦးချင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း 1% အောက်စီဂျင်အနီးရှူရှိုက်ရသောတစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်။
1.4% အောက်စီဂျင်အနီးတွင်အသက်ရှုစဉ်လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဖိအား 100 ATA တူညီသို့မဟုတ်ကျော်လွန်ရပေမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Pharmacopoeia (USP) နှင့် Compressed ဓါတ်ငွေ့အသင်း (CGA) အဆင့်တစ်ဦးကအသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့် 99.0% ထက်မနည်းဖြစ်ဆေးဘက်တန်းအောက်စီဂျင်ကိုသတ်မှတ်, အမျိုးသားမီးသတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက USP ဆေးဘက်တန်းအောက်စီဂျင်ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။
အခြားသူတွေအတွက်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ် pharmacologic ကြားဝင်တစ်ခုတွဲဖက်နေစဉ်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကမူလတန်းကုသမှုနည်းလမ်းကိုယ်စားပြုတယ်။
ကုသမှုတစ်ခု Monoplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းသို့မဟုတ် Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းတစ်ခုခုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Monoplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်များ တစ်ခုတည်းစိတ်ရှည်ပြီးရှိကြတယ်; တစ်ခုလုံးကိုအခန်းထဲကအနီး 100% အောက်စီဂျင်နှင့်အတူဖိအားများနှင့်လူနာတိုက်ရိုက်ပတ်ဝန်းကျင်အခန်းထဲကအောက်စီဂျင်ရှူရှိုက်နေသည်။
Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်များ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလူတွေက (လူနာလေ့လာသူများနှင့် / သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှု်ထမ်း) ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။
လူနာမျက်နှာဖုံးများ, ဦးခေါင်းတစုံတရာပေး, ဒါမှမဟုတ် endotracheal ပြွန်မှတဆင့် 100% အောက်စီဂျင်အနီးအသက်ရှူစဉ် Multiplace ကုန်သည်များချုံ့လေနှင့်အတူဖိအားနေကြသည်။
အဆိုပါ UHMS ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့် Medicare နှင့် Medicaid ကိုန်ဆောင်မှုများ (CMS) နှင့်အခြားတတိယပါတီသယ်ဆောင်များအတွက်စင်တာများ၏ပြဌာန်းခွင့်အရ, ဖိအား 100 လေထုမှာဆေးဝါးကုသမှုတန်း 1% အောက်စီဂျင်အသက်ရှူသို့မဟုတ် 100% အောက်စီဂျင်မှကိုယ်ခန္ဓာ၏အထီးကျန်အစိတ်အပိုင်းဖော်ထုတ်ဖွဲ့စည်းမထားဘူး Hyperbaric အောက်စီဂျင်ကုထုံး။
အဆိုပါ Hyperbaric လူနာတစ်ဦးဖိအားပေးထားတဲ့အခန်းထဲကအတွင်းရှူရှိုက်မိပါသဖြင့်အောက်ဆီဂျင်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိသတင်းအချက်အလက် Pressurization ဖိအားတွေ 1.4 ATA သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဖို့ဖြစ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
လက်ရှိတွင် 14 USA တွင်လက္ခဏာများအတည်ပြုရှိပါတယ်။
Clostridial Myositis နှင့် Myonecrosis (ဂတ်စ် Gangrene)
ထိခိုက်အနာတရရရှိမှု, compartment Syndrome နှင့်အခြားထူးခြားသောစိတ်ထိခိုက် Ischemias နှိပ်စက်
နှောင့်နှေးရောင်ခြည်, ထိခိုက်အနာတရရရှိမှု (အနုတစ်ရှူးနှင့်ဘိုနီ Necrosis)
acute အပူလောင်, ထိခိုက်အနာတရရရှိမှု
Idiopathic ရုတ်တရက် Sensorineural ကြားနာဆုံးရှုံးမှု
တစ်ဦး Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကဘာလဲဖြစ်သည်မဟုတ်လော
လိမ်းအောက်စီဂျင်, ဒါမှမဟုတ် Topox တစ်ဦးစှနျးကျော်ထားရှိနှင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်အတူဖိအားကြောင်းသေးငယ်တဲ့အခနျးတစျဆငျ့အုပ်ချုပ်သည်။ အဆိုပါလူနာအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူရှိုက်ရ, မဖိအားခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်လူနာလိမ်းအောက်စီဂျင်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်မှာစနစ်တကျသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ရသော Hyperbaric ဆေးပညာ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှု, အများစုမှအကျိုးမပေးနိုငျ (အောက်တွင် Hyperbaric ရူပဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ကိုထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ Topox အောက်စီဂျင် 30-50 မိုက်ခရွန်၏အနက်မှာတစ်သျှူးမှတဆင့် diffuses သောအယူအဆအပေါ်အခြေခံသည်။  ဒီနည်းလမ်း DCS, သွေးလွှတ်ကြောဓာတ်ငွေ့ emboli (အသက် AGE), သို့မဟုတ်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO) အဆိပ်သင့်လိုဆကျဆံမထားဘူး။
အဆိုပါ Topox ဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖိအား differential ကိုစက်ချုံ့ဖို့စက်ကိုပွင့်လင်းလေထုအကြားဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဖိအားစက်ထဲကတွန်းခံရခြင်းမှစှစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်, box ရဲ့ cuff အားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဲ့သို့သော tourniquet အတွက်စှန်းကျင်ကအရမ်းတင်းကျပ်စွာ fit ရမည်ဖြစ်သည်။ Topox အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသည်မဟုတ်, မကခြေမအနာ၏ကုသမှုများအတွက်ဂျာနယ်ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ထောက်ခံသည်။
အခန်းထဲက၏အခြားအမျိုးအစားကတော့ခရီးဆောင်အပျော့စား Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပျော့ရေယာဉ်များ (ATA) အကြွင်းမဲ့အာဏာ 1.2-1.5 လေထုဖို့ဖိအားနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသာအမြင့်နာမကျန်း၏ကုသမှုများအတွက် FDA ကအတည်ပြုကြသည်။ ဤအမြင့်မားမြင့်ဖြားနာအိတ်ထဲကအတော်များများမှားယှငျးစှာပိတ် Off-တံဆိပ်လက္ခဏာများအတွက် "အပျော့စား Hyperbaric ကုန်သည်များ" အဖြစ်ရောင်းချခဲ့လျက်ရှိသည်။
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT) နောက်ကွယ်မှရူပဗေဒစံဓာတ်ငွေ့ဥပဒေများအတွင်းတည်ရှိသည်။
Boyle ရဲ့ဥပဒေ (p1 v1 = p2 v2) ၏လျှောက်လွှာ Hyperbaric ဆေးပညာအများအပြားရှုထောင့်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော decompress အနာရောဂါ (DCS) သို့မဟုတ်သွေးလွှတ်ကြောဓာတ်ငွေ့ emboli (အသက် AGE) အဖြစ် embolic ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဖိအားတိုးပွါးသကဲ့သို့, ကိုရည်မှတ်ပူဖောင်း၏အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအခန်းထဲက decompress နှင့်အတူအရေးပါလာ; လူနာသူမ၏အသက်ရှုရရှိထားသူလျှင်, ဓာတ်ငွေ့ပမာဏတိုးချဲ့ကျော်အဆုတ်ထဲမှာပိတ်မိနေကာ pneumothorax ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ချားလ်စ်ဥပဒ ([p1 v1] / T1 = [p2 v2] / T2) သင်္ဘောဖိအားအခါအပူချိန်တိုးနှင့် depressurization နှင့်အတူအပူချိန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းကရှင်းပြသည်။ ဤသည်အလွန်နေမကောင်းဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ် intubated ကြသူကလေးများသို့မဟုတ်လူနာကုသတဲ့အခါမှာမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
အဆိုပါဆရာတစ်ဦးလူနာလက်ခံရရှိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အောက်စီဂျင်တွက်ချက်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒီငွေပမာဏကိုစံရန်အလို့ငှာ, (ATA) အကြွင်းမဲ့အာဏာလေထုအသုံးပြုကြသည်။ (; လေကြောင်းသုံးပြီးလျှင် 100% အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးအတွက်များသောအားဖြင့် 21%) နှင့်ဖိအားမြှောက်ဒါကဓာတ်ငွေ့အရောအနှောထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရာခိုင်နှုန်းကနေတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖိအားပင်လယ်ရေထဲတွင်နေချိန်မှာတဦးတည်းကြောင့်နက်ရှိုင်းမှဆငျးသခဲ့ကြသည်လျှင်ဖိအားတွေ့ကြုံသောပင်လယ်ရေ၏ခွထောကျထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အတိမ်အနက်နှင့်ဖိအားနညျးလမျးမြားစှာအတွက်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကဘုံဘာသာပြောင်းစတုရန်းလက်မနှုန်းပင်လယ်ရေ = 1 ပေါင် (psi) = 33 ဘား၏ပင်လယ်ရေ = 10 မီတာ 14.7 လေထု = 1.01 ခွကေိုဖြစ်ကြသည်။
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT) ဝေါဟာရရှင်းလင်းချက်
Hyperbaric အောက်စီဂျင်ကုထုံး 100 မိနစ်အချိန်-များသောအားဖြင့် 60 တစ်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအဘို့အပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့ဖိအားမှာ 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုအောက်စီဂျင်အသက်ရှူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖော်ပြသည်။
လေထုဖိအား - ငါတို့သည်အသက်ရှူအဆိုပါလေကြောင်း 20.9 ရာခိုင်နှုန်းကိုအောက်စီဂျင်, 79 ရာခိုင်နှုန်းကနိုက်ထရိုဂျင်နှင့် 0.1 ရာခိုင်နှုန်းကအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့များဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိပြီးဒီအလေးချိန်ဆွဲငင်အားကမ္ဘာမြေစင်တာဆီသို့ဆွဲကြောင့်သာမန်လေထုဖိအားပေး၏။ အဆိုပါဖိအားကြုံတွေ့လေထုဖိအားအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာလေထုဖိအားစတုရန်းလက်မ (psi) နှုန်း 14.7 ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။
Hydrostatic ဖိအား - သင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တက်သည့်အတိုင်းသင်အထက်တွင်လေထု၏ပမာဏကိုလျော့နည်းအလေးချိန်ကြောင့်, လေထုဖိအားလျော့နည်းစေပါသည်။ သငျသညျပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ငုပ် အကယ်. ရေလေထုထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုအလေးချိန်ရှိပါတယ်ကွောငျ့, ဆန့်ကျင်ဘက် (ဖိအားတိုး) တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဦးတည်းရေအောက်မှာ သာ. ဖိအားဆငျးသ။ ဒါဟာဖိအားပေးမှု hydrostatic ဖိအားကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လေထု Absolute (ATA) - ATA မသက်ဆိုင်တည်နေရာမှန်ကြောင်းဖိအားမှန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒီနည်းလမ်းတစ်ဦးစံနက်ရှိုင်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိခြင်းရှိမရှိရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဖိအားကိုတိုင်းတာဘို့အမျိုးမျိုးသောဝေါဟာရများရှိနေပါသည်။ HBO ကုထုံး hyperbaric ဖိအားဟုခေါ်ဝေါ်သောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာမြေကြီးတပြင်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအတွေ့ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖိအားကိုအသုံးပြုသည်။ hyperbaric ဖိအားကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်ယူနစ်မီလီမီတာမာကျူရီသို့မဟုတ်လက်မ (mmHg, inHg) တို့ပါဝင်သည်, ပင်လယ်ရေ (fsw, MSW) ၏တစ်စတုရန်းလက်မ (psi), ခွကေိုသို့မဟုတ်မီတာနှုန်း POUNDS, နှင့် (ATA) လေထုအကြွင်းမဲ့အာဏာ။
အကြွင်းမဲ့အာဏာ, ဒါမှမဟုတ် 1 ATA တစ်ခုမှာလေထု, ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်, ဒါမှမဟုတ် 14.7 psi မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ပျမ်းမျှလေထုဖိအားသည်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာ, ဒါမှမဟုတ်2ATA နှစ်ဦးကလေထု, နှစ်ကြိမ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဆိုပါလေထုဖိအားသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး2ATA မှာ HBOT ကုသမှုတစ်နာရီပြဋ္ဌာန်းထားလျှင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာနှစ်ခုကြိမ်လေထုဖိအားမှာနေစဉ်လူနာတစျနာရီများအတွက် 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုအောက်စီဂျင်ရှူရှိုက်။
Hyperbaric မေးခွန်းများကို : Hyperbaric ရှာဖွေမှုများကို : Hyperbaric သတင်းအချက်အလက်